सोधिने प्रश्न - शेन्जेन एन-प्लस टेक्नोलजी लिमिटेड।
स्मार्ट होम श्रृंखला
DC द्रुत श्रृंखला
मामला र समाचार
तपाईँको ग्यारेन्टी के?
हामी प्रदान2वर्ष एसी चार्जर्स लागि ग्यारेन्टी र डीसी चार्जर्स लागि 1 वर्ष वारेन्टी। मामला मा कुनै पनि असामान्यता को चार्जर्स गर्न हुन्छ, यो पछि-बिक्री नीति, घरेलू वा विदेशी बजार मा कुनै कुरा रूपमा निम्न उपचार लागू:
1 जस्तै असामान्य सञ्चालन, ताराहरु असामान्यताहरु, नेटवर्क असफलता रूपमा केही सरल समस्या, लागि, हामी ग्राहक गर्दा साइटमा मर्मत गर्न टाढैबाट समर्थन।
2. जटिल समस्या वा गुणस्तर खतरहरुको लागि, हामी ग्राहक को बिग्रेको भागहरु / एकाइहरु प्रतिस्थापन गर्न लागि स्पेयर पार्ट्स / एकाइहरु प्रदान गर्न क्षतिपूर्ति। विक्रेता लिन ग्राहक गर्न स्पेयर पार्ट्स / एकाइहरु जहाज गर्न परिवहन लागत लागि जिम्मेवारी र हामी यातायात साधन चयन गर्नुहोस्।
हो, हामी त्यहाँ गर्दा ठूलो अर्डर आउन सम्मान गर्नुपर्छ प्रत्येक उत्पादनको लागि MOQ हुँदा, पहिलो पटक 1 ~2नमूनाहरू स्वीकार गर्न सक्छन्।
तपाईं हाम्रो बैंकमा भुक्तानी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। नमूना लागि अर्डर विरुद्ध 100%, 50% जम्मा, ठूलो अर्डर लागि ढुवानी अघि 50% रकम भुक्तानी।
फ्लोर २, भवन 6, नम्बर १०२26 सोनबाई रोड, नानशान जिल्ला, शेन्जेन, चीन।
टेलिफोन: ०86-133-१339 21२ 69 8 8 1717
J1772 प्लग eV चार्जर , Indoor Fast Ev Charger, Type1 Socket Ev Charging Station, 10kw Portable Ev Charger, टाइप २ प्लग ई चार्ज स्टेशन , ईभ , सबै उत्पादहरू